PressReader - Ilanga langeSonto: 2018-10-07 - Uthathe isinqumo esinzima usgaqa
Uthathe isinqumo esinzima usgaqa
Umndeni uthi uzolidlulisela phambili icala
Ilanga langeSonto - 2018-10-07 - Izindaba - SANDILE MAKHOBA
UNQUME ukubopha imithwalo yakhe aphume ekhaya kubo umdansi wase-afrotainment, unhlahla “Sgaqa” Chiliza ( osesithombeni) obesolwa ngecala lokunukubeza intombazane (13) yangakubo elamontville, ethekwini.
Lo mdansi uthathe lesi sinqumo ngemuva kokuba ngolwesihlanu inkantolo ilichithile leli cala abesolwa ngalo. Engxoxweni abenayo NELANGA Langesonto ephuma enkantolo, uthe ukubona kuphephile ukuba asuke kule ndawo ayoqala impilo yakhe kabusha kwenye indawo.
Utshele leli phephandaba ukuthi ubevele ezazi ukuthi umsulwa, kodwa ubehlonipha umthetho. “Umphakathi esikhulele kuwona, yiwona ogcina ulawula impilo yethu kanye nomthetho okumele siwuhloniphe. Bengazi kahle kamhlophe ukuthi angiyenzanga le nto,” kusho usgaqa. Ngesikhathi ephuma enkantolo akakhombisanga ukujabula, kodwa ubebukeka ezikhululekele nje.
Ubephelezelwe ngamalungu omndeni wakhe, abangani nalabo asebenza nabo. Ngawo ulwesihlanu, icala alizange lingene kwakungena enkantolo, kodwa kuvele kwabizwa usgaqa wangena ngaphakathi nommeli wakhe, umnu Sandile Shoba.
Akuphelanga mizuzu emingaki baphumela ngaphandle kwathiwa icala selichithiwe. Ummeli wakhe utshele intatheli ukuthi umshushisi uthe abutholakalanga ubufakazi obenele. “Uthe (umshushisi) uyalichitha leli cala ngoba abukho ubufakazi obenele obungenza leli cala lingene enkantolo,” kusho ummeli ushoba.
Emuva kokuphuma kwalesi sinqumo, UDJ Tira ongumphathi kasgaqa, wehluleke ngisho wukuzibamba yinjabulo.
“Siyabonga kunkulunkulu. Bekunzima kithina ebesisebenza naye. Abanye bebezitshela ukuthi sesimlahlile kanti besi- hlonipha amalungelo abantu besifazane njengoba ubesahlabe ikhefu lokuba angaveli emphakathini. I-afrotainment ilwa kakhulu nokuhlukunyezwa kwabantu besifazane,” kusho utira.
Utshele leli phephandaba ukuthi lithe lichithwa nje icala, wabuyela emsebenzini wakhe. Usgaqa akagcini ngokudansela utira, kodwa nguyena oqeqesha abadansi babaculi abehlukene okubalwa kubona UTDK Macassette, ucharector, udladla Mshunqisi notipcee.
Uphinde abe nohlelo lokuthuthukisa intsha ngakubo elamontville. Uthi usazoqhubeka nayo yonke imisebenzi abeyenza endaweni yangakubo.
UDININWE UMNDENI WESISULU
Ngemuva kokuzwakala ukuthi inkantolo iyalichitha leli cala, kwenyuke imimoya emndenini wesisulu, wadinwa. Udadewabo wesisulu esiligodlile igama lakhe ukuvikela isisulu, uthi bewumndeni kabagculisekile ngokuchithwa kwecala.
“Siphatheke kabi ngesinqumo senkantolo. Okubuhlungu wukuthi siwumndeni kasitshelwanga ukuthi icala lichithiwe enkantolo, sibone ngaye (usgaqa) esehamba nommeli namalungu omndeni wakhe.
"Kusize ukuthi sibhoke ngola- ka ukuze sitshelwe ukuthi kwenzekani ngecala nokuthi yini eyenze ukuba lichithwe yinkantolo.
"Udadewethu uhlukumezekile kuyimanje ngesigameko esamehlela. Uzophatheka kabuhlungu uma ezwa ukuthi icala lichithiwe enkantolo,” esho efuthelana.
Uthi udadewabo akasenzi kahle nasesikoleni ngenxa yalokhu. Kumanje uphuza amaphilisi okwehlisa ingcindezi awanikwe ngudokotela.
“Njengoba icala lichithiwe kule nkantolo, umndeni uzimisele ukulidlulisela phambili futhi kasigculisekile nangendlela umphenyi walo abeliphethe ngayo ngoba nezimpahla zikadadewethu (isisulu) uzilande sekwedlule izinsuku isigameko senzekile,” kusho udadewabo wesisulu.
Kuphele isikhathi esingaphezu kwehora uyise wesisulu evalelene nomshushisi, unkz Nsiki Qhunyiso ehhovisini emchazela ngokwenzeka enkantolo. Uyise wesisulu uphume ehhovisi likamshushisi amehlo ebomvu. Abephume ngezinkani amalungu omndeni wesisulu, ephelezelwa nangamalungu omphakathi abegqoke imifaniswano ye-african National Congress (ANC).
ILANGA Langesonto lithinte imenenja yase-afrotainment, umnu Senzo Shezi, layibuza ngokuthi bazizwa kanjani njengoba umndeni uthi ufuna ukudlulisela phambili icala, wathi: “Sizowuhlonipha umthetho njengoba singeke sinqabe uma inkantolo iphinde imbiza usgaqa ukuba azovela phambi kwayo futhi.”
Okhulumela inational Prosecuting Authority KwazuluNatal, unkk Natasha Kara, akakwazanga ukuchazela ILANGA Langesonto ngemininingwane yesinqumo sokuchithwa kwecala, wathi uzoze akwazi ukuyithola kahle ngomsombuluko.
Kuzokhummbuleka ukuthi usgaqa uboshwe ngoncwaba (August) wadedelwa yile nkantolo ngebheyili ka-r5 000. makhoba@ilanganews.co.za phumelela@ilanganews.co.za